Misoro yeNhau dzaNhasi, Chitatu, Nyamavhuvhu 15, 2018
Nyamavhuvhu 15, 2018
Magweta emutungamiri weZanu PF, uye vari mutungamiri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa, anosvitsa mudare Constitutional Court magwaro ekupikisa zvakasvitswa mudare iri nemutungamiri weMDC Alliance, VaNelson Chamisa, vachiti dare rivadome VaChamisa mbune kuti ndivo vakakunda musarudzo yemutungamiri wenyika, kana kuti sarudzo iyi iitwe patsva.
Gweta rine mukurumbira munyika, VaTendai Biti, voramba vakatsika madziro vachiti vakapambwa nehurumende kubva kuZambia nokudaro havafaniri kutombomiswa pamberi pematare emuZimbabwe nekuti vakadzoswa zvisiri pamutemo kuZimbabwe vachibva kuZambia kwavakange vanotsvaga hupoteri uko dare reko rakati vasaburitswe munyika iyi.
Vanhu vakawanda vochema chema nekukwira kwemitengo yezvinhu panguva iyo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyaya dzemari.
Nyanzvi dzozeya mutemo weZimbabwe Democracy and Economic Recovery Act, ZIDERA, uyo wakavandudzwa ukasainwa kuva mutemo nemutungamiri weAmerica, VaDonald Trump. Mutemo uyu wakavandudzwa paine chinangwa chekupa Zimbabwe mukana wekugadzirisa hukama hwayo neAmerica kuburikidza nekuita sarudzo dzakachena, kuremekedza kodzero dzevanhu pamwe nekuremekedza mitemo nemitongo yematare.
Muchirongwa cheLiveTalk na 8pm tiri kutarisa zvinoreva kuvandudzwa kwemutemo weZIDERA kwakaitwa neAmerica
Munokwanisawo kunzwa Studio7 na6 am - Muvhuro kusvika Chishanu, pamasaisai anoti 909 am, 4930, 7270, ne 9885 Short Wave
VaZelenskyy Vokurudzira Kuti VaPutin Vatemerwe Zvirango Zvakaomarara
VaBiden Voyambira China Kuti Vanogona Kutumira Mauto Kubatsira Taiwan
Rwendo rwaVaMnangagwa kuSwitzerland Rwoonekwa Zvakasiyana muNyika
Vanhu Vana, Kusanganisira Vatyairi Vose Vafa Pabonderana Mabhazi eZUPCO
Mapurisa Oenderera Mberi neKusunga Nhengo dzeCCC Pasi peMutemo weMOPA Kana Dzichiita Misangano